Akụkọ - Zns mkpokọta ọhụụ - Gbanyụọ mkpokọta mkpokọta
Top & elu nwanyị
Uwe na akwa mmiri
Pant & Uwe elu
Trenchi & Jaketị
Blazer & mkpuchi
Nchịkọta Ọhụrụ Zns - Nchịkọta Gbanyụọ Ọrịa
Nchịkọta ọhụụ Zns - Nchịkọta Gbanyụọ Ọrịa
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ibido usoro ọhụụ nke Viral Off Collection.
N'oge a karịsịa chebe onwe anyị na nchekwa dị mkpa karịa. Gbanyụọ mkpokọta mkpokọta jiri Polygiene ViralOff® teknụzụ nke ga-enye nchebe mara mma ma nwee ntụsara ahụ. Viral Off nkpuchi na sweatshirt na-nabatara ka ahaziri iji, ahaziri style na ahaziri agba.
N'oge nke akwụkwọ akụkọ Coronavirus, anyị na-ahụ nnukwu mkpa maka ọgwụgwọ na antiviral Njirimara. Polygiene malitere ozugbo na ngalaba nlekọta n'oge ọgụ megide SARS na 2004. Site na nzụlite anyị, anyị nwere ike ịgafe usoro, usoro, usoro na usoro dị mkpa iji kwadebe maka mwepụta nke Polygiene ViralOff® - teknụzụ ọgwụgwọ teknụzụ. .
Polygiene ViralOff bụ akara maka ọgwụgwọ nke textiles na ngwaahịa ndị ọzọ na-ebelata nje virus anwale site na 99% n'ime awa abụọ. Ọ bụ ọgwụgwọ na-adịgide adịgide na mgbe niile. Ka ngwaahịa zuo ike ruo awa abụọ ma ọ dị mma ịga ọzọ. Maka ịrụ ọrụ nke ọma na nkwado, sachaa obere, naanị mgbe achọrọ ya.Ọ naghị emetụta akpụkpọ ahụ n'ihi na ọ naghị egbochi ahihia nje nke anụ ahụ.
Rm.1101, Tower 2, Dexin digital ụlọ ọrụ Building, No.2008 Jinchang Rd., Yuhang District, 311113 Hangzhou, China
Ngwa Ngwaahịa - - Sitemap - - AMP Ekwentị